भाल्भेर्डेको भविष्यको विषयमा छलफल गर्न बार्सिलोनाको बैठक बस्दै !
मुख्य पृष्ठखेलकुद फुटबलभाल्भेर्डेको भविष्यको विषयमा छलफल गर्न बार्सिलोनाको बैठक बस्दै !
एजेन्सी, २५ पुस । स्पेनिस सुपरकोपाअन्तर्गत सेमिफाइनलमा हार ब्यहोरेपछि बार्सिलोनाका प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भेर्डेलाई तनाव थपिएको छ । एथ्लेटिको मड्रिससँग हारेपछि भाल्भेर्डेको भविष्यको विषयमा बार्सिलोनाको बोर्ड मिटिङ बस्ने भएको छ ।
बिहीबार राति भएको सुपर कपअन्तर्गत सेमिफाइनल खेलमा बार्सिलोनाले एथ्लेटिको मड्रिडसँग २–३ गोलले पराजित भयो । साउदी अरेबियास्थित किङ अब्दुल्लाह स्पोर्ट्स स्टेडियममा भएको उक्त खेलमा एथ्लटिकोलाई जिताउन कोके, अल्भारो मोरोटा र एन्जल कोरेर्राले समान एक–एक गोल गरे । यता, बार्सिलोनाका लियोनल मेस्सी र एन्टोइन ग्रिजम्यानले एक–एक गोल गरे ।
हारसँगै सर्वाधिक १३ पटकको विजेता टोली बार्सिलोना यो पटक सेमिफाइनबाटै घर फर्कियो भने एथ्लेटिकोले फाइनलमा रियल मड्रिडसँग उपाधिका लागि खेल्ने भयो । यस हारपछि बार्सिलोनाले भाल्भेर्डेको भविष्यको विषयमा बैठक डाकेको स्पेनिस रेडियो ‘आरएसी वान’ मिडियाले जनाएको छ ।
उसका अनुसार बार्सिलोनाका अध्यक्षसहितको उक्त बोर्ड बैठक आगामी सोमबार बस्नेछ । जसले भाल्भेर्डेको भविष्यको विषयमा निर्णय लिनेछ । पछिल्लो समय बार्सिलोनाले उनलाई बर्खास्त गर्न सक्ने चर्चा चलिआएको छ । सम्भवतः यस बैठकले उनलाई के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।